Home - Micro MKT Co., Ltd
မဟာအောင်မြေ၊ ၆၅ နှင့် ၆၆ လမ်းကြား၊ ၄ဝ နှင့် ၄၁ လမ်းကြား/ နဝရတ်လမ်းသွယ်၊ အိမ်အမှတ်(ဓ၃/၄၁)
PIC Development Board V.2.0
China Locomotive 1100HP 11VDC
Engine Over Speed Device
Locomotive Load Test Bench
ABOUT Micro MKT TECHNOLOG!ES
ကျနော်များ MKT Electronic မှ - Locmotive spare part and MicroController Design များကို တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ အကြံပြုဆွေး နွေးပေးခြင်း၊Example code များကို ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊MicroController Programming အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ MicroController Firmware များရေးသားပေးခြင်း၊ အဓိက က Locomotive spare part,Control system , Diagnostic Display ထုတ်လုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။
Product by MKT Electronic
Charging Amp Meter
DC Volt Meter Product
တွဲမီးသုံးပစ္စည်း 24V LED Lamp
PIC to HMI
MKT အီလက်ထရောနစ် ( MICRO MKT Co., Ltd. )
MKT အီလက်ထရောနစ် ကို ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် Micro MKT Co., Ltd အမည် အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
Business Lines =>> Computer Control , PLC Control , SCADA system , Microcontroller Control Unit For engine , Safeguard , Auto Voltage Regulator , Locomotive Diagnostic Display Unit , Locomotive Auto Voltage Regulator, Locomotive DC to DC Converter , Locomotive Voltage to Current Converter , Locomotive Battery Current Meter, Locomotive Engine R.P.M Meter, Locomotive Engine Over Speed Protect Unit, Locomotive Driver Interface Unit, Locomotive Speedometer Unit ......etc..
>> Go to MKT Profile <<
PIC Microcontroller & STM32 Basic Programming Training
Micro MKT CO.,LTD ဆိုတာဘာလဲ ?
Micro MKT CO.,LTD အခြေစိုက်ရာကတော့ မန္တလေး မြို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Microcontroller ကို အများဆုံးအသုံးပြုပြီး Embedded System Design ပြုလုပ်ပြီး Railway Locomotive များတွင် အများဆုံးအသုံးပြုပြီး www.mktelectronic.com တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ပြင်ပလူသုံးကုန် ပစ္စည်းများအတွက်လည်း Code Development လုပ်ပေးခြင်း ၊ Signal layer , Double layer , Fourth Layer Printed Circuit Board များ P.C.B Drawing ဆွဲပေးခြင်း ၊ ပစ္စည်းတပ်ဆင်ထုတ်လုပ် ပေးခြင်း များကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ယခုအခါ နည်းပညာကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှ လေ့လာသူများ အတွက် Electronic and Programming Language ဘာသာရပ်တွေကို စတင်လေ့လာလိုခြင်း၊ ပိုမိုတတ်ကျွမ်းလိုခြင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် မန္တလေးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော သင်တန်းကျောင်း တစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။
Read more: PIC Microcontroller & STM32 Basic Programming Training
Copyright © 2021, Micro MKT Co., Ltd.. All Rights Reserved.
MKT Electronic | Developed by: MMITSG